အလိုက်သိတဲ့ခယ်မလေး – Grab Love Story
မင်းဇော် တစ်ယောက် အလုပ်တာဝန် ပြီးပီ မို့ အိမ်ကို ပြန်လာခဲ့တယ်….. လေးရက်လုံးလုံး မိမိ အထက်လူကြီး နဲ့ ခရီးစဉ် တလျောက် ပါသွားခဲ့တာ အခု မနက်ပိုင်း ပြန်ရောက်ခဲ့တာ မို့ နေ့လည်ပိုင်း ရုံးပြန်မတက်ချင်တော့ ။ မိမိ အထက်လူကြီးမှလည်း ပြန်နားပါတော့ ဆိုတာနဲ့ အိမ်ကို တန်းပြန်လာခဲ့တယ် ။ အိမ်ပြန်ရောက်တော့ အိမ်ရှေ့ တခါး ပိတ်ထားတာ နဲ့ တခါးခေါက်လိုက်ပီး စောင့်နေလိုက်တာ ခနနေတော့ မင်းဇော် ရဲ့ခယ်မ ၀ါဝါ တစ်ယောက် တံခါးလာဖွင့်ပေးတယ် ။ အိမ်မှာက မင်းဇော်ရယ် မိန်းမ ဝေမာလှိုင်ရယ် ခယ်မလေး ၀ါဝါဦး ရယ် သုံးယောက် နေကြတယ် ။ မင်းဇော်မိန်းမ ဝေမာလှိုင်က ဆရာမ ။ ၀ါဝါဦးကတော့ အခု မှ တက္ကသိုလ် တက်နေတုန်း ဒုတိယ နှစ် ။ ကျောင်းတက်ရင်းနဲ့ မင်းဇော် တို့ အိမ်မှာ ပဲ နေနေတယ် ။ အိမ်က ကျယ်ကျယ်လွင့်လွင့် ရှိပီး အခန်းသုံးခန်း ပါတော့ ဒီမှာပဲ ခယ်မလေး ၀ါဝါဦး ကလိုက်နေတယ် ။ တခါတခါတော့ သူတို့ အမေ မင်းဇော် ယောက္ခမ ဒေါ်စိုးစိုးဦး လာတယ် ။ တစ်လ တခါလောက်တော့လာတယ် ။ မင်းဇော် ယောက္ခမ ဒေါ်စိုးစိုးဦးက အခု မှ အသက်လေးဆယ်ကျော်ကျော်သာ ရှိသေးတယ် ။
အိမ်ထောင်ပြုတာ စောပီး သမီးနှစ်ယောက် ရှေ့ဆင့်နောက်ဆင့် မွေးခဲ့တယ် ယောက္ခထီးကတော့ သူတို့ ငယ်ငယ် မှာ ပဲ ဆုံးပါးသွားခဲ့တော့ သမီး နှစ်ယောက် အရွယ်ရောက် တဲ့ အထိ ဒေါ်စိုးစိုးဦး ပဲ ရှာဖွေကျွေးမွေး ခဲ့ရတာ မင်းဇော်နဲ့ ဝေမာလှိုင် အိမ်ထောင် ပြု တာ လည်း မကြာလေး တစ်နှစ်ကျော်ကျော် သာရှိသေးတယ် ၀ါဝါ က တံခါးဖွင့်ပေးအပီး အိမ်ထဲလှမ်းဝင်ခဲ့လိုက်တယ် ဝေမာလှိုင် ရှိပုံ မရ ကျောင်းဖွင့်ရက်မို့ ကျောင်းသွားသည်ထင်တယ် ၀ါဝါ နင် အတန်းမရှိဘူးလား ကျောင်းမသွားဘူးလား အတန်းက မနက်က တချိန် ရှိတယ် တက်ပီး ပီ အခုက နေ့လည်ပိုင်းနောက်ဆုံးချိန်တစ်ချိန်ပဲ အတန်းရှိတာ မို့လို့ မတက်ချင်တာနဲ့ ပြန်လာလိုက်တာကိုကြီး အော် အေးအေး မင်းဇော် လက်ပတ်နာရီ ကို ကြည့်လိုက်တော့ နေ့လည် ဆယ့်တစ် ခွဲ ကျော်ကျော် ပဲရှိသေးတယ်။ ကိုကြီး ထမင်းစားတော့မလား ညီမ ပြင်လိုက်မယ်လေ အေး နေပါဦး ရေမိုးချိုးလိုက်ပါဦးမယ်ဟာ ဟုတ်ကဲ့ ကိုကြီး .. ဒါဆို ပြင်ထားလိုက်မယ် ရေချိူးပီး စားလိုက်ပေါ့ ညီမလေးလဲ မစားရသေးဘူး အတူတူစားရအောင်နော် အင်း…အင်း လှည့်ထွက်သွားတော့ ၀ါဝါကိုတချက်ကြည့်လိုက်မိတယ် ။
အင်းး နောက်ပိုင်း အလှက တော့ သူ့အမ အတိုင်းပဲ တင်းရင်းနေတာများ ထမိန် အပျော့သား ၀တ်ထားတာမို့ အောက်ခံပင်တီ ကြိုးရာလေး က တင်ပါး အစပ်နားမှာ ပေါ်နေတယ် ။ လုံးဝန်းသော တင်ပါးတစ်စုံ နိမ့်တုံမြင့်တုံဖြင့် လျောက်လှမ်းသွားတယ် ။ အိမ်နောက်ခန်း ထဲ ၀င်သွားတာ ကြည့်ပီးတော့မှ မင်းဇော်လည်း အိပ်ခန်းထဲ ၀င်ကာ ရေချိုးရန် အ၀တ်တွေ ချွတ်ပီး အောက်ပိုင်း ကို တဘက် အဖြူဖြင့် ပတ်ထားလိုက်တယ် ။ ခုန က ခယ်မလေး ရဲ့ နောက်ပိုင်း အလှကို မြင်ပီး အောက်က ညီတော်မောင်က ဖောင်းကြွနေတော့ တဘက် အဖြူပတ်ထားတဲ့ ပေါင်ဂွကြားနေရာက ဖောင်းဖောင်းကြီး ထနေတယ် ။ လေးငါးရက် ကျော် ငတ်ပြတ်နေတဲ့ ညီတော်မောင် ကို ညကျမှ ဝေမာလှိုင် နဲ့ အစာကျွေးရဦးမယ် ရေချိုးခန်း ၀င်မယ် အလုပ် ဒေါက် ဒေါက် အခန်းတံခါး ခေါက်သံကြားလိုက်ပီး ၀ါဝါ ရဲ့ အသံလေး ထွက်လာတယ် ကိုကြီး ..ညီမလေး ပါ ၀င်ခဲ့မယ်နော် အော် ..အေးအေးးး တံခါးဖွင့်ပီး လှမ်းဝင်လာတဲ့ ၀ါဝါ ရဲ့ လက်ထဲမှာ သောက်ရေဖန်ခွက်လေး တစ်ခွက် ကျွန်နော် အပေါ်ပိုင်းဗလာ နဲ့ အောက်က တဘက်ပတ်ထားတာကြီး မြင်တော့ အခန်းဝ မှာ တွေတွေ လေး ရပ်သွားတယ်။
ကိုကြီး ရေသောက်ဘို့ပါ အပြင်က တအားပူလို့ အပူရှပ်မစိုးလို့ သောက်ရေ လာတိုက်တာ ကျွန်နော့် ကို သေချာ မကြည့်ပဲ ခေါင်းငုံကာ ပြောလာတယ် ။ တော်တော် အလိုက်သိတဲ့ ခယ်မလေး ။ ကျေးဇူးနော် ၀ါဝါ ကျွန်နော် သောက်ရေခွက်ကို လှမ်းယူလိုက်တော့ ခေါင်းကို ငုံပီး ဖန်ခွက်ကိုင်ထားတဲ့လက်ကလေး တွေက တဆက်ဆက် တုံနေတာ သတိ ထားလိုက်မိတယ် ။ ရေဖန်ခွက်ကို မော့သောက်ရင်း ၀ါဝါ ကို သေချာ စိုက်ကြည့်လိုက်တယ် ခေါင်းကို ငုံထားဆဲ ။ အပေါ်ပိုင်း စပို့ရှပ် လေး ၀တ်ထားတဲ့ ၀ါဝါ ရဲ့ နို့သီးလေးတွေက စပို့ရှပ် အကြပ်လေး ပေါ်မှာ ငေါထွက်နေတယ် ။လက်တဘက်က အခြားလက်တဘက် ကိုင်ထားပီး လက်ချောင်းလေး တွေ မသိမသာ တဆက်ဆက် တုံနေတုန်းပဲ ။ရေကို ခပ်ဖြေးဖြေး သောက်ရင်း ၀ါဝါ ရဲ့ အလှတွေ ကို သေချာ ကြည့်မိနေတယ် ။ ၀မ်းဘိုက် နားက သူ့ အမ ဝေမာလှိုင်လို သိပ်မထွက် ချပ်ချပ်ရပ်ရပ် ရှိသေးတယ် ။ထမိန် အပျော့သားလေး ကို တင်းတင်းရင်းရင်း ၀တ်ထားပီး အောက်ဆုံးမှာ တော့ ဖွေးဥတဲ့ ခြေထောက် နုနုလေး ခြေသည်းနီအနီရောင်လေး ဆိုးထားပီး ပန်းပွင့်ပုံလေးတွေ ပုံဖော်ထားတဲ့။
ခြေချောင်းလေးတွေကလည်းချစ်စရာ ရေသောက်ပီး ဖန်ခွက်ပြန်ပေးလိုက်တော့ လှမ်းလာတဲ့ လက်ကလေး တွေမှာလည်း လက်သည်းနီ အနီရောင် လေး တွေ ဆိုးထားတယ် ။ ဖန်ခွက်ကို လှမ်းလိုက်တဲ့ လက်ကလေးကို မင်းဇော် အသာ ဖမ်းဆုပ်လိုက်တော့ ၀ါဝါ တစ်ယောက် ခေါင်းမော့လာတယ် ၀ါဝါ အရမ်းလှလာတယ်နော် လက်ကလေးတွေ ခြေချောင်းလေးတွေ ကလည်း ချစ်စရာလေး လက်သည်းနီရောင်လေးနဲ့လည်း လိုက်တယ် ရှက်ကိုးရှက်ကန်း အမူအရာလေးဖြင့် အာာာ ကိုကြီး ကလည်း လျောက်ပြောနေတယ် တကယ်ပြောတာပါ ၀ါဝါ အရမ်းလှလာတယ် ကျောင်းမှာ ရီးစားတွေ ရနေပီလား အာာ ကိုကြီးကလဲ ပြောဘူး ရှက်တယ် မပြောလဲ သိပါတယ် ဒီလောက် ချောလှတဲ့ ငါ့ခယ်မ နားမှာ ကောင်လေးတွေ ၀ိုင်းဝိုင်းလည်နေမှာပဲ ဟုတ်တယ်မလားး အာ သိဘူး သိဘူး ဖန်ခွက်ကို ယူပီး လှည့်ထွက်မယ် အလုပ် မင်းဇော် ၀ါဝါ ရဲ့ လက်ဖျံကို လှမ်းဆွဲ လိုက်တာ ကြောင့် ဖန်ခွက်က အောက်ကို ပြုတ်ကျသွားတယ် ။ဖန်ခွက်က ကွဲမသွား ခြေသုတ်ခုံပေါ် ကို ကျရောက်သွားတယ် ၊။ ၀ါဝါဦး ကို မင်းဇော် ဆွဲ ယူလိုက်တယ် ။
မင်းဇော် ရဲ့ ရင်ခွင် ထဲကို ၀ါဝါ ကျရောက်တော့မလောက်ထိ နီးကပ်သွားတယ် ။ ဟင်…ကိုကြီးးး ဘာလုပ်မလို့လဲ မင်းဇော် ၀ါဝါ ကို နဲနဲ ထပ်ဆွဲလိုက်တော့ အပေါ်ပိုင်း ဗလာ ဖြစ်နေတဲ့ မင်းဇော် ရင်ခွင်ထဲကို ၀ါဝါ ခေါင်းလေး ရောက်ရှိသွားပီး မင်းဇော်က ၀ါဝါ ကို တင်းကြပ်စွာ ဖက်ထားလိုက်တယ် အို ..ကိုကြီး မလုပ် မလုပ်ပါနဲ့ မကောင်းပါဘူး ´၀ါ .. အရမ်းလှနေတယ်ကွာ ကိုကြီး စိတ်တွေ မထိန်းနိုင်တော့ဘူး လက်တဘက်က ပုံခုံး ကို အတင်းဆွဲ ဖက်ထားပီး လက်တဘက်က ခါး ကို ဆွဲထားတာကြောင့် ၀ါဝါ တစ်ယောက် ရုန်းမရ ။ ကိုကြီးးးး မလုပ်ပါနဲ့ မမ သိသွားလို့ ဒုက္ခ ရောက်ပါ့မယ် နော် ဝေလေး မသိစေရပါဘူး ကွာ နော် ကိုကြီး စိတ်တွေ ထိန်းမရ ဖြစ်နေပီ ၀ါဝါ လည်း တက္ကသိုလ် ကျောင်းသူတစ်ယောက် ဖြစ်နေပီ ဒီကိစ္စ နားလည်မှာပါနော် ဟင်အင်းးးး မသိဘူး ၀ါကြောက်တယ် ၀ါဝါ တစ်ယောက် မင်းဇော် ရင်ခွင်ထဲ ရောက်နေပေမယ့် သူမ ရဲ့ ရင်သားတွေ ရှေ့မှာ လက်နှစ်ဘက်ကို ကာဆီးကာ မင်းဇော်ရင်ဘက်နဲ့ မထိ အောင် ကြိုးစားထားတယ်။ မင်းဇော် ရင်ဘက် နဲ့ သူမ ပါး က ထိနေပီးတော့။
မင်းဇော်ထံမှ ချွေးနံလိုလို ယောင်္ကျား တစ်ယောက် ရဲ့ ကိုယ်နံ့ က ၀ါဝါ နှာခေါင်းထဲ တိုးဝင်လာတယ် ။ ၀ါဝါ ရင်ဘက်ထဲ က နှလုံး ခုန်သံတွေကလည်း မီတာ ၁၀၀ ပြေးထားသလို အရမ်းခုန်နေပီ ။ ၀ါဝါ့ မှာ ရီးစား ရှိပါတယ် ဒါပေမယ့် အခုလိုမျိုးကြီးတော့ တခါမှ မနေဖူး ပန်းခြံမှာ ချိန်းတွေ့ လက်ကလေး ကိုင် ပါးလေး နမ်း ရုံ အဆင့်သာရှိသေးတယ် ။ မင်းဇော် ကလည်း သူမ ကို အတင်းအကြပ် ပွေ့ ဖက်ထားပီးတော့ သူမ ရဲ့ တင်ပါးတွေ အနားထိ လက်တွေက ပွတ်သပ်နေတယ် ။ ပီးတော့ သူမ ကို ဖက်ထားရင်း ဦးခေါင်းမှ ဆံနွယ်တွေ ကို လည်း နမ်းရှိုက်နေသေးတယ် ။ ခါး ကို ကိုင်ပီး တချက် ခပ်တင်းတင်း အဖက် မှာ သူမ ရဲ့ ၀မ်းဘိုက် ဆီ ကို ခပ်မာမာ တစ်ခု က လာထောက်တယ် ။ အဲ့ဒါ ဘာလဲ ဆိုတာ ၀ါဝါ သိပါတယ် ။ခါးမှာ ဖက်ထားတဲ့ လက်တွေက ၀ါဝါ့ ရဲ့ တင်ပါးတွေ အပေါ် ထိ ပွတ်ဆွဲ လိုက်ချိန် မှာ တော့ ၀ါဝါ တစ်ယောက် အရှင်လတ်လတ် ဓါတ်လိုက်ခံလိုက်ရသလို မျိုး စိတ်တွေ ဂယောင်ခြောက်ခြား ဖြစ်သွားတယ် ။ ရုန်းကြည့်တယ် မရ ။ ရုန်းလိုက်တိုင်း ပိုမို တင်းကြပ်လာတဲ့ လက်ကြီးတွေ။
တင်ပါးပေါ်က လက်တွေကလည်း တဖြည်းဖြည်း ဖင်နှစ်ခြမ်း အကွဲ ကြောင်း ထဲ ရောက်လာကာ ပွတ်သပ်လာတော့ ၀ါဝါ ရဲ့ အတွင်းပိပိ နေရာ က ရွစိစိ လို ဖြစ်လာပီး အရည်စိုလေး တွေ ထွက်လာသလိုလို စိတ်ထဲ ထင်မိတယ် ။ ၀ါဝါ့ ဒူးတွေ ညွတ် ချင်လာသလိုလို အသက်ရှူ မ၀တော့သလိုလို ဖြစ်လာတယ် ။ ရုန်းကန် ဘို့ အင်အား တွေ မရှိတော့ ။ ရင်ဘက် နှစ်ခုကြား ရောက်နေတဲ့ ၀ါဝါ လက်တစ်စုံ က တဖြည်းဖြည်း လျော့ကျလာပီး မင်းဇော် ရဲ့ ခါး ကို မသိမသာလိုလို ဖက်မိသွားတယ် ။ ၀ါဝါ ကျော ကို ဖက်ထားတဲ့ မင်းဇော် ရဲ့ လက်တဘက်ကလည်း တဖြေးဖြေး ပြေလျော့လာပီး လက်နှစ်ဘက်လုံး ၀ါဝါ့ ရဲ့ တင်ပါးတွေ ဆီ ကျရောက်လာရင်း ပွတ်သပ်လာတယ် ။ ၀ါဝါ မရုန်းတော့ ။ မင်းဇော် ရဲ့ ရင်ဘတ်ထဲ မှ တဒုန်းဒုန်း ဖြင့် ရင်ခုန်သံတွေ မြန်နေတာကို လည်း ၀ါဝါ ကြားနေမိသလို သူမရဲ့ ရင်ခုန်သံတွေ ကလည်း မင်းဇော် နဲ့ အတူတူ အပြိုင်ခုန်နေတယ် ။ ကိုကြီးးး ၀ါ ကြောက်လာပီကွာ မမ သိသွားမှာ စိုးတယ် မစိုးရိမ်ပါနဲ့ ၀ါ ရယ် .. ဘယ်သူမှ မသိစေရပါဘူးနော် စိတ်ချပါနော် ကိုကြီး ၀ါ့ ကို ချစ်တယ်ကွာ။
၀ါဝါ တစ်ယောက် မင်းဇော် ရဲ့ ရင်ခွင်ထဲ က နေ မျက်နှာလေး ခွာလိုက်ပီး မင်းဇော် ကို ကြည့်လိုက်မိတယ် ။ မင်းဇော် နဲ့ ၀ါဝါ မျက်လုံးချင် ဆုံပီး တခဏတာ အခိုက်အတန့် မှာ မင်းဇော် ရဲ့ နုတ်ခမ်းတွေ က ၀ါဝါ့ရဲ့ နုတ်ခမ်းပါးပါးလေး တွေ အပေါ် ကျ ရောက်လာတယ်။ ၀ါဝါ့ နုတ်ခမ်းတွေ ကို မင်းဇော် အငမ်း မရ စုတ်နေရင်း နုတ်ခမ်း လွှာ ကြားထဲကို မင်းဇော် ရဲ့ လျှာ က တိုးဝင်လာပီး လျှာဖျားလေး အချင်းချင်း မွှေနှောက် ရစ်သိုင်းလာတယ် ။ နိုင်ငံခြား ကားတွေ ထဲက နမ်းတာ မျိုး ၀ါဝါ တစ်ယောက် သိပီးသားမို့ သူမလည်း မင်းဇော် ရဲ့ နုတ်ခမ်းသားလေးတွေကို ပြန်စုပ်ပေးလိုက်ရင်း လျှာ ဖျားလေးတွေ အချင်းချင်း ထိုးမွှေပေးလိုက်တယ် ။ မင်းဇော် ရဲ့လက်တွေက ထမိန်ပေါ် မှာ ပြေးလွှား ပွတ်သပ်နေရာမှ ၀ါဝါ ရဲ့ ထမိန် အထက်ဆင် စ ချည်နှောင်ထားတဲ့ နေရာလေး ကို ကိုင်ကာ ဖြေချလိုက်တယ် ။ ထမိန်က ကြမ်းပြင်ပေါ် ကို ကွင်းလုံး ပုံကျ သွားပီးတဲ့ နောက် ၀ါဝါ တင်ပါးပေါ်မှာ ဇာပင်တီ အဖြူရောင်လေး သာ ကျန်တော့တယ် ။ ၀ါဝါ ရဲ့ လက်တွေ က လည်း မင်းဇော် ရဲ့ ကျောကုန်းတလျောက် ပွတ်သပ် ရင်း အနမ်းတွေ ပြန်လည် ပေးနေမိတယ် ။
မင်းဇော် ရဲ့ လက်တွေ က ပင်တီ ပါးပါးလေး သာ ရှိတော့ တဲ့ ၀ါဝါ ရဲ့ တင်ပါးတွေ ပေါ် ပြေးလွှား နေရင်း လက်တဘက်က ပင်တီ မျော့ကြိုးလေး ထဲ ထိုးဝင်ကာ ဖင် အကွဲ ကြောင်းကြားလေး မှ တဆင့် ၀ါဝါ ရဲ့ အဖုတ်နေရာလေး ကို မမှီ မကမ်းလှမ်းနှိုက်လာတယ် ။ လက်ခလယ် ချောင်းလေး က ၀ါဝါ ရဲ့ စိုစိစိ လေး ကို စမ်းမိသွားတော့ ၀ါဝါ ရှက်သွားရင်း နုတ်ခမ်းတွေ နုမ်းနေတာ ကို ရပ်ကာ မင်းဇော် ရဲ့ ရင်ခွင်ထဲ ကို ခေါင်းဝှက်ထားမိတယ် ။ ဒူးတွေ ကွေးညွှတ်ချင်သလိုလို ဖြစ်သွားတာ မို့ လက်နှစ်ဘက်ကို မင်းဇော် ရဲ့ ချိုင်း အောက်မှ လျှိုသွင်းကာ မင်းဇော် ပုခုံးကို လှမ်းချိတ် ကာ ဖက်ထားလိုက်မိတယ် ။ အားးး ကိုကြီးးးး ဖြေးဖြေး လုပ်ပါ အားးး ၀ါ့ နေရာလေး က တအား စိုနေပီနော် အာာ မပြောနဲ့ကိုကြီးရာ ရှက်တယ် မရှက်ပါ နဲ့ ၀ါရယ် ကိုကြီး ဟာကြီး လည်း တအားတောင်မတ်နေပီ ကိုင်ကြည့် ဟု ဆိုကာ မင်းဇော်က ခါးမှာ ပတ်ထားတဲ့ တဘက် ကို ဖြေချပစ်လိုက်တယ် ။ မင်းဇော် ရဲ့ လီးကြီး က ချက်ချင်း ရူန်းကြွလာပီး ၀ါဝါ့ ရဲ့ ဆီးခုံအထက် ၀မ်းဘိုက်နေရာလေး ကို လာထိတယ် ။
လီးထိပ်မှ အရည် ကြည်လေးတွေက ၀ါဝါ့ ရဲ့ ချက်နားလေး ကို လာစိုသွားတယ် ။ မင်းဇော် က ၀ါဝါ ရဲ့ လက်တဘက်ကို ယူကာ သူ့ လီးကြီး ပေါ် တင်ပေးလိုက်တယ် ။ ၀ါဝါ လက်ကလေး တွေ တဆက်ဆက် တုန်ရင်း မင်းဇော် လီးကြီး ကို ကိုင်ထားမိတယ် ။ လက်ဖ၀ါးထဲတွင် အပြည့် ဖြစ်သွားတယ် ။ မင်းဇော်လီးကြီး က ခန္ဒာကိုယ် ရဲ့ အပူချိန်ထက် ပိုပူ ပိုနွေးနေသလို ခံစားမိတယ် ။ ၀ါ ကုတင်ပေါ် သွားရအောင်နော် ၀ါဝါ ဘာမှ ပြန်မဖြေမိ ။ မင်းဇော် ခေါ်ဆောင်ရာ ကို လိုက်သွားမိပီ ။ ကုတင်ပေါ် ရောက်တော့ ပက်လက်လေး လှန်ထားတဲ့ ၀ါဝါ ရဲ့ ပင်တီ လေးကို မင်းဇော် လှမ်းချွတ်လိုက်တယ် ။ အပျို စဖြစ်ကတည်း က ဘယ်သူ့ ကိုမှ အမြင် မခံဖူးသေးတဲ့ ၀ါဝါ ရဲ့ စောက်ဖုတ်ကို မင်းဇော် မြင်သွားပီ။ ၀ါဝါ ရှက်တာကြောင် ပေါင်နှစ်ချောင်း ကို လိမ်ကာ အဖုတ်လေး ကို ဖုန်းကွယ်ထားသေးတယ် ။ အဖုတ်ကို သေချာ မမြင် ရပေမယ့် အဖုတ်ပေါ်မှာ အမွှေးတွေ ကို တော့ သေချာ မြင်သွားပီ ရှက်လိုက်တာ … မင်းဇော်က ၀ါဝါ ရဲ့ တီရှပ် အကျီ လေးကို ပါ ခေါင်းမှ နေ၍ ချွတ်ပစ်လိုက်တယ်…. ၀ါဝါ ပို လို့ ရှက်သွားတယ် ။
အိမ်နေရင်း မို့ ဘော်လီ အဟောင်းလေး သာဝတ်ထားမိတဲ့ အဖြစ် ဟုတ်တယ်လေ တခြားယောင်္ကျားလေး မြင်သွားတယ်ထားဦး ဘော်လီ ဘရာဇီယာ အသစ်ကလေး နဲ့ ဆိုတော်သေးတယ် အခု က ချည်သား ခပ်နွမ်းနွမ်း ဘော်လီ လေး သာ ၀တ်ထားတာ မို့ ပိုပီး ရှက်သွား အားနာသွားသလိုပဲ။ မင်းဇော် လက်တွေက ဘော်လီ အနွမ်းလေး ပေါ် မှ နို့တွေ ကို ပွတ်သပ်လာတယ် ။ မင်းဇော် အတွက် ကိစ္စ မရှိ ဘော်လီ နွမ်းနွမ်း ဟောင်းဟောင်း အသစ်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် သူမြင်ချင်တာ က ဘော်လီ အောက်မှ နို့တွေ သာဖြစ်တယ် ။ ဘော်လီ ချိတ်တွေ ကို လှမ်းဖြူတ်မယ်လုပ်တော့ ၀ါဝါ ကျောလေး ကို မသိမသာ စောင်းပေးလိုက်မိတယ် ။ မင်းဇော် ဘော်လီ ချိတ်တွေကို ဖြုတ်ပီး ဘော်လီ ကိုချွတ်ပစ်လိုက်ကာ ကုတင်ဘေးသလို့ လှမ်းပစ်လိုက်တယ် အားးးး ၀ါ့ နို့လေးတွေက လှလိုက်တာ ကွာ ပြောလည်း ပြော နို့သီး တဘက်ကို ကိုင်ပွတ်ရင်း နောက်တဘက်ကို ကုန်းစို့တော့တယ် ။ နို့သီးခေါင်းလေးတွေကို လျှာလေး နဲ့ ရစ်ပတ်ကာ စို့လိုက်ချိန်မှာတော့ ၀ါဝါ လက်မောင်းသားလေးတွေ မှာ ကြက်သီးလေးတွေ ပါ ထသွားတယ် ။
စို့၇င်းစို့၇င်း နဲ့ လက်တဘက်က ၀ါဝါ့ ရဲ့ ပေါင်တွင်းသားလေးတွေ ကို လှမ်းအပွတ် အာာာ ကိုကြီး ယားတယ်ကွာ ခိခိ ဟိ အားးး ယားတယ်လို့ အဲ့နေရာကို မပွတ်နဲ့ အဲ့လို ပြောလိုက်မှ မင်းဇော်လက်တွေက ၀ါဝါ ရဲ့ ဆီးစပ်နားက အမွှေးတွေပေါ် ကို ပြောင်းပွတ်လိုက်တာ ကြောင့် ပိုဆိုးသွားတယ် အားးး ကိုကြီးးးး ယားတယ် ဟိ..ဟိ..ဟီးးးး ၀ါဝါ တစ်ယောက် တွန့်တွန့်လူး သွားရင်း မင်းဇော် ကို လှမ်းဖက်ထားမိသည် ။ ဖီးလ် တက်နေတာ အရှိန်နဲနဲ လျော့သွားပေမယ့် ၀ါဝါ့ ရင်ထဲ မှာတော့ ကြောက်စိတ်တွေ နဲနဲ ပျယ်သွားသလို ရှိကာ မင်းဇော် နဲ့ ပိုမိုရင်းနှီးကျွမ်းဝင်သွားသလို ခံစားလိုက်ရတယ် ။ မင်းဇော်ကလည်း ၀ါဝါ့ရဲ့ ခါးလေးတွေ ပေါင်တွင်းကြောလေးတွေ အဖုတ်အမွှေးနေရာလေးတွေ လျောက်ပွတ်ရင်း ကျီစားလိုက်တယ် ။ ဟိဟိ ကိုကြီး ယားတယ်လို့ အဲ့လို မစ နဲ့ကွာ..ခစ် ခစ် ခစ် ၀ါဝါ တစ်ယောက် မောလာတယ် မင်းဇော် ကလည်း ၀ါဝါ တစ်ယောက်တွန့်လူး နေတာ ကို ကြည့်ပီး ပို သဘော ကျသွားတယ် ။`ကိုကြီးးး ၀ါ အခု လို တခါမှ မနေဖူးဘူး အခုလို နေမိတာ ၀ါ့ ကို အထင်သေးမှာလားနော်။
အော်..၀ါ ရယ် ကိုယ့် ခယ်မလေး ကို အထင်သေးပါ့မလား လို့ မင်းဇော် စကားတွေ ပြောနေရင်း လက်တဘက်က ၀ါဝါ့ ရဲ့ နို့သီး ခေါင်လေး တွေ ကို ဆော့ကစား ပေးလိုက်တယ် ။ အပျို နို့သီးခေါင်းလေး မို့ မာမာဆူဆူ လေး ဖြစ်နေတယ် ။ နို့အုံလေးတွေက အစ မာမာ တင်းတင်း ရှိလှတယ် ။ ကိုကြီး စို့ပေးသိသာ မကြီး ။ အဖုတ် ဘေး မှာ သူ့ မိန်းမလို များ အဖတ်ကလေး တွေ တွဲနေသလား လက်ချောင်းလေးများ ဖြင့် ဖြဲကြည့်မိတယ် မရှိ ။အတွင်းသို့ လက်ခလယ်လေး တစ်ဆစ်လောက် နှိုက်လိုက်တော့ အရည်စိုစို တွေ ပိုများနေတယ် ။ စောက်ဖုတ် အတွင်းထဲသို့ လက်ချောင်းလေး အား ၀င်ထွက် ဖြေးဖြေး ချင်းလုပ်ပေးရာမှ တဖြည်းဖြည်း ပိုချောမွေ့လာတယ် အားးး အင်းးး ကိုကြီး ဖြေးဖြေး အားးး ၀ါဝါတို့ ကျောင်းသူတွေ အချင်းချင်း လိင်ကိစ္စ တွေ ပြောဖူးကြားဖူးနေတာ မို့ ၀ါဝါ တစ်ယောက် အလိုး ခံပေးရတော့မယ် ဆိုတာလဲ စိတ်ထဲ သိနေတယ် ။သူမရဲ့ အပျိုစင် ဘ၀ ကို လည်း အဆုံးသတ်ရတော့မယ် ။ အခု အပျိုစင်ဘ၀ အဆုံးသတ်ရန်အတွက်လည်း ၀ါဝါ အသင့်ဖြစ်နေပီ ။
နို့တွေ စုပ်ရင်း အဖုတ်ပွတ်ပေးနေတဲ့ မင်းဇော် ရဲ့ လီး ကြီး ကို ခပ်ကျစ်ကျစ် ဆုပ်ကိုင်ထားမိပီ ။ အားးး ကိုကြီးးး အားးး အင်းးးး အားးးကိုကြီးရယ် အားးးး ၀ါဝါ့ စောက်ပတ် မှာ အရည်တွေ အများကြီး ထွက်နေပါပီ ။ စောက်ဖုတ် ကြီး ကို ကော့ကော့ ပေးနေမိရင်း လက်တွေက မင်းဇော် ရဲ့ ခေါင်းမှ ဆံပင်တွေ ကို ပါ ဆွဲစုပ်ကိုင်ကာ နို့သီးတွေပေါ် ကို ဖိဖိ ထားမိတယ် ။တဖြေးဖြေးနဲ့ မင်းဇော် ရဲ့ လက်ချောင်း က တစ်ချောင်းလုံး အဖုတ်ထဲမှာ ၀င်လိုက်ထွက်လိုက် ကလိနေပီ ။ အဖုတ်ရည်တွေကလည်း ပိုပို ရွဲလာတယ် ။ မင်းဇော်လည်း ဘေးတိုက် အနေအထားမှ အဖုတ် နှိုက်နေတာ ကို ရပ်လိုက်ပီး ၀ါဝါ့ ကိုယ်ပေါ် ကို အုပ်မိုး ကာ ပေါင်ကြားထဲ ခွဝင်လိုက်တယ် ။ နို့သီးလေး ကို စုပ်ကာစုပ်ကာ ဖြင့် ဖြေးဖြေး ချင်းအောက်ကို လျောဆင်းလာခဲ့ပီ ။တဖြည်းဖြည်း မင်းဇော် ခေါင်းက ၀ါဝါ့ ရဲ့ အဖုတ်နားလေး ကို ရောက်လာကာ မင်းဇော် လျှာ ကို အပြားလိုက် ထုတ်လိုက်ရင်း စောက်ဖုတ်မွှေးလေးတွေအပေါ် ကို ယက်ပေးလိုက်တယ် အားးးး ကိုကြီး မလုပ်ပါနဲ့ ငရဲကြီးလိမ့်မယ် အားးး ၀ါဝါ ရုန်းသလိုလုပ်လိုက်ကာမှ ၀ါဝါ့ ပေါင်တွေက မင်းဇော် ခေါင်း ကို ညှပ်လိုက်သလို ဖြစ်သွားကာ။
အဖုတ်က လည်း ကော့ပေးလိုက်သလို ဖြစ်သွားတယ် မင်းဇော် နှာခေါင်းထဲ ခပ်ရွှန်းရွှန်း အနံတစ်ခု ရလိုက်တယ် ။ ဒါ အပျိုတစ်ယောက် ရဲ့ အဖုတ်အနံ့ ပဲလေ ။မင်းဇော် လက်နှစ်ဘက် ဖြင့် ၀ါဝါ့ ပေါင်တွေ ကို ဆွဲကား ပစ်လိုက်တယ် ။ ဟစိစိ အဖုတ်လေး အား သေချာ တွေ့မြင်လိုက်ရပီ ။ ၀ါဝါ့ စောက်ပတ် မှာ ပြဲလန်မနေ ဖောင်းဖောင်းကားကားလေး ကြားထဲမှာ အကွဲခြမ်းလေး နှစ်ခု က ဟစိစိ လေး ။ ဟစိစိ အဖုတ် အကွဲလေး ကြားထဲမှာ အစိလေး က မသိမသာ စွာ ပဲရှိနေတယ် ။ အဖုတ်အရည်ကြည်လေးတွေ ထွက်နေတာကြောင့် အတွင်းသားလေးထဲမှာ ပြောင်ချောချောလေး ဖြစ်နေတယ် ။ မင်းဇော် လျှာ ကို အပြာလိုက် ထုတ်လိုက်ပီး အဖုတ်သားလေးတွေကို ယက်ပေးလိုက်တယ် အားးး ကိုကြီးးးးအားးးအားးကိုကြီး ရယ် ဘယ်လို ကြီးမှန်းမသိဘူးကွာ အားးးးဝါ၀ါ့ ပေါင်တွေ က အလိုလို ကားထားမိနေပီး အဖုတ်ကြီး ကိုလည်း ကော့ကော့ ပေးနေမိတယ် ။ အခု လို အဖုတ်ယက်ခံရမယ်လို စောစောကထိ တောင် မတွေး ထားဘူး ။ မင်းဇော်လီးကြီး သာ ထိုးသွင်းမယ်လို့ ထင်ထားခဲ့တာ ။
၀ါဝါ့ အဖုတ် ကို မင်းဇော် ယက်စုပ်လိုက်တိုင်း ဘိုက်ထဲက ကလီစာတွေ အူတွေပါ ပြတ်ထွတ်သွားသလား ခံစားမိတယ် ။ အဖုတ်အယက်ခံရတဲ့ အရသာ ကို ၀ါဝါ ကြိုက်သွားပီ ။ တချက်တချက် မင်းဇော် လျှာ ထိပ်ဖျား က အဖုတ်အတွင်းသား ထဲ အထိပါ ရောက်ရောက်လာတယ် ။ ၀ါဝါ အဖုတ်ကို ကော့ကော့ ပေးရင်း အယက်ခံနေမိတယ် ။ မျက်လုံးတွေ ကို မှိတ်ထားကာ နုတ်ဖျားမှ လည်း ညီးညူနေမိတယ် အားးး ကိုကြီးးးးအားးး အင်းးးး´ပလက် ပလက် ပလက် အားး ကိုကြီးရေ အားးးး အားးးးရှီးးးးအားးး ၀ါဝါ မရှက်နိုင်တော့ ပါးစပ်မှ လည်း ညည်းညူ ရင်း အဖုတ်ကို အယက်ခံနေမိတယ် အားးး ကိုကြီးးးး ကောင်းတယ်ကွာအားးး ဟုတ်တယ် အထဲကို ယက်ပေး အားးး ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် မင်းဇော်လက်ကလည်း အဖုတ်ကို ယက်ပေးနေရင်း လက်တွေက အဖုတ်မွှေးတွေကို ပွတ်ပေး ကစားပေးနေလိုက်တယ် ။ အားးး ကိုကြီး ရေအားးး အားးး ခပ်စိစိ အနေအထား မှ သေသေချာချာ လေး ပွင့်အာလာသော စောက်ပတ် အား မင်းဇော် အားရပါးရ ယက်ပစ်လိုက်တယ် စောက်ပတ် တပြင်လုံး အရည်တွေ ရွဲနေပီး မင်းဇော် နုတ်ခမ်းတွင်လည်း အရည်တွေ လည်ချောင်း ထိပါ စီးကျနေပီ ။
ဒီလောက် ရွဲစို ပြောင်ချောနေပီ ဖြစ်တဲ့ အတွက် မင်းဇော် ၀ါဝါ့ ကို ပါကင် ဖောက်ရန် အချိန် တန်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း သိလိုက်သည် ။ မင်းဇော် စက်ပတ်ကုန်းယက် နေရာ မှ ထကာ ၀ါဝါ့ ဒူး နှစ်ချောင်း ကို ဘေးသို့ထောင်ကားလိုက်ရင်း ပေါင်ဂွကြားထဲ နေရာ ယူလိုက်သည် ။ မင်းဇော် လီးကြီး ကလည်း အစွမ်းကုန် မတ်ထောင်နေရင်း ခေါင်းတညိမ့်ညိမ့် ဖြင့် သူရဲ့ လားရာ ကို သွားရန် အဆင်သင့် ဖြစ်နေပီ ။၀ါဝါ့ အဖုတ် ၀ ကို လက်ညိုးလက်ခလယ်လေး ဖြင့် အသာ ဖြဲလိုက်ကာ မင်းဇော် လီးဒစ် ကို အသာ မြုပ်လိုက်တယ် အားးး ကိုကြီး ဖြေးဖြေးနော် ဒစ်ခေါင်း အား အဖုတ် အကွဲ ကြောင်း တစ်လျောက် စုန်ချီဆန်ချီ ဖြင့် လေးငါးဆယ်ချက် ပွတ်ဆွဲလိုက်သည် ။ အားးး ကိုကြီး အ အ အားး လီးဒစ်ခေါင်း ဖြင့် ဖိဆွဲ မိလိုက်သည့် အခါတိုင်း ၀ါဝါ့ အစိ လေး က ကျဉ်ခနဲ ကျဉ်ခနဲ ဖြစ်သွားသည် ။ ဘယ်လို့ အရသာ မသိ ။ တခါတလေ ရေသောက်လိုက်တဲ့ အချိန် သွားကြားထဲ ကျဉ် တဲ့ အရသာလေးမျိုး ။ ခံစားလို့လည်း ကောင်းသည် ။ နာကျဉ်သလို ရှိနေသော်လည်း ဆက်ပီး ခံစားချင်နေမိတဲ့ အရသာမျိုး ။
ဘယ်အချိန် အတွင်းထဲ ကို တိုးဝင်လာမလဲ ဆိုတာ ကို မျက်စိမှိတ်ထားရင်း ၀ါဝါ တစ်ယောက် မျှော်လင့်နေတုန်းမှာပဲ မင်းဇော် ရဲ့ လီးဒစ် ထိပ်ဖျားက ဗျစ်ကနဲ ထိုးခွဲ ၀င်ရောက်လာသည် အ…အားးးး မင်းဇော် လက်မောင်း တွေကို လှမ်းဆွဲရင်း ကိုင်ထားလိုက်မိသည် ။ ခန္ဒာ ကိုယ် ကလည်း တွန့်ခနဲ ဖြစ်သွားသည် ။ မင်းဇော် ကလည်း ချက်ချင်းကြီး အထဲ ထိ ထိုးမသွားပါ လီးဒစ် ကိုသာ သွင်းလိုက်ထုတ်လိုက် ဖြင့်လုပ်နေရင်း အထဲကို ဖြေးဖြေး ချင်း တိုးဝင်သည် ။ တချက်တည်း ဖြင့် အဆုံးထိ မဖြစ် နိုင်မှန်း သိတယ် ။ အထဲကို ကြပ်ကြပ်ညှပ်ညှပ် တိုးဝင်နေရ တာကြောင့် လီးဒစ်ဖျား နှင့် အရေပြား ကြားမှာ လဲ နာကျဉ်မှု ဖြစ်နေတယ် ။ အရည်တွေ တအား ထွက်နေတာ မို့ ချော မွှေ့နေသော်လည်း အဆုံးထိ မသွင်းနိုင်။ ခါးကို အားစိုက်ကာ နှဲ့နှဲ့ သွင်းနေရာက တဖြေးဖြေး နှင့် လီးတစ်ဝက်ကျော် ၀င်လာလေပီ။ ဗျစ် ဗျစ် ဗျစ် အ ..အာ..အားးးအားးး ကိုကြီး နဲနဲ နာတယ် အင်းးး ၀ါ ကိုကြီး ဖြေးဖြေး သွင်းနေတယ် နော် အားးး ကြပ်လိုက်တာ ၀ါရယ် ကိုကြီး အဆုံးထိ ထိုးထည့်တော့မယ်နော်။
အင်း….အား….နာတယ် အမလေး..အား…ကိုကြီး နောက်ဆုံး တစ်ချက် မင်းဇော် အားစိုက်ပီး ခပ်ပြင်းပြင်းထိုးခွဲ ပစ်လိုက်သည်။ လီးဒစ်နေရာမှာ ပါ နာကျဉ်သွားလိုပဲ အာာား နာတယ် နာတယ် အားးးးး မင်းဇော် နဲ့ ၀ါဝါ ဆီးခုံချင်း ကပ်ဖိထားလိုက်သည် ။ လီးက အဆုံး အထိ ၀င်သွားပီ ။ သူများတွေပြောသလို မျိုး အပျိုစင် အမှေး ပါးကို ထိုးခွင်းလိုက်ပီ ထင်သည် ။ လီးတံ အဆုံးထိ မရောက်ခင်မှာပင် အထဲက ဒုတ်ခနဲ အသံ မျိုး ခံစားမိလိုက်တယ် ။ လီးချောင်း ကို အထုတ်အသွင်း မလုပ်သေးပဲ အဆုံးထိ သွင်းကာ အမောဖြေနေလိုက်သည် ။ ၀ါဝါ ကလည်း မင်းဇော် ရင်ဘက် ကြီး တွေ ကို လှမ်းကိုင်ထားသည် ။ ငါးမိနစ်လောက် အမောဖြေပီးသည့်နောက် ၀ါ ..ကိုကြီး ဆက်လုပ်မယ်နော် ရရဲ့လား အင်းးး ဖြေးဖြေး နော် ကိုကြီး နဲနဲ နာနေတယ် အင်းးး ခနနေ လောက် ဆို အနာ သက်သာ သွားမှာပါ ၀ါက အပျိုမို့လို့ နာတာပါ မင်းဇော် ၀ါဝါ့ ရဲ့ ခါးလေး ကို ကိုင်ကာ လီးတံကို ဖြေးဖြေးချင်း ဆွဲထုတ်လိုက်သည် ။ ဘွတ် ဘွ..ဘွတ် အတွင်းမှ လေအံသံ များ ပါ ထွက်လာသည် ။ ၀ါဝါ့ အဖုတ်မှ လေအံသံများ ထွက်သွား သဖြင့် နဲနဲ တော့ ရှက်သွားသည် ။
မင်းဇော် လီးတံကို ထုတ်လိုက်သွင်းလိုက် ဖြေးဖြေး ချင်း လုပ်ပေးနေရာ ၀ါဝါ လည်း အတွင်းမှာ ခုနက စပ်ဖျဉ်းဖျဉ်း နာကျဉ်မှု ကို မေ့လျော့လာသည် ခံစားမှုလည်း ကောင်းလာသည် ။ခေါင်းလေး ကို အသာထောင်ကြည့်မိတော့ ၀ါဝါ့ အဖုတ် ထဲ ကို လီး ထိုးထိုး ၀င်နေတာ ကို တ၀က်တပြက် လှမ်းမြင်နေရသည် ။ အ အ အာာအားးး ကောင်းရဲ့လား ၀ါ အင်း သိပ် မနာ တော့ဘူး ကောင်းလာပီ ကိုကြီး မြန်မြန် လုပ်ကြည့်မယ်နော် ၀ါဝါ အဖုတ် ကို လှမ်းဖြဲပေးထား နော် အာာ ကိုကြီးကလဲ ၀ါ နာမှာ စိုးလို့ပါ မင်းဇော် က ၀ါဝါ့ ရဲ့ လက် ကို လှမ်းယူကာ အဖုတ် ပေါ် တင်ပေးလိုက်သည် ။။ ၀ါဝါ လည်း အဖုတ် နုတ်ခမ်းသား နှစ်ဘက်ကို သေချာ လေး ဖြဲပေးလိုက်တယ် ။ ဘွတ် ဘွတ် ဘွတ် အားးးအားးး ကိုကြီးးး အားးး နာကျဉ်မှု ဝေဒနာ မှသည် တဖြေးဖြေး ကောင်းလာပီ။ ၀ါဝါလည်း အဖုတ်ကို ပြန်ကော့ပေးနေမိပီ။ အားး ကိုကြီး ကောင်းတယ် အားးး တဖြည်းဖြည်း စောင့်ချက်တွေ က ပိုမို မြန်ဆန်လာသလို ဆီးခုံ နဲ့ ပေါင် နဲ့ ရိုက်သံ တဖတ်ဖတ် အသံတွေ လည်း ဆူညံလာသည် ဤ အသံကပင် လိင်စိတ် ကို ပိုမို နှိုးစွ လာသလိုလို ထင်မိတယ် ။
အားး ကိုကြီး စောင့်ပေးတော့ ၀ါ ခံနိုင်နေပီ အားးးကောင်းတယ် မင်းဇော် လိုးနေရင်းက ပင်နို့တွေကို ပါ လှမ်းလှမ်းဆွဲသည် ။ မင်းဇော် လက်က ပေါင်တံတွေကို ကိုင်ပီး လိုးသည့် အချိန် ဆို ၀ါဝါ ကလည်း သူမ နို့တွေကို သူမ လက်ဖြင့် ပွတ်ချေနေပီ`အားးး အားးအ ပက်လက် လှန် လိုးခံနေသော ၀ါဝါ စောက်ပတ်ထဲမှ လီးတံ ကို ချွတ်ပစ်လိုက်တယ် ။ အာကိုကြီး လုပ်လေကွာ ဘာလိုချွတ်ပစ်တာလဲ ၀ါ့ ဖင်ကိုကြည့်ပီး လိုးချင်လို့ ဖင်ကုန်းပေးပါလားနော် လေးဘက်ထောက်လိုက်လေ အာာ အဲ့လို ကြီး မလုပ်ပေးချင်ဘူးကွာ လုပ်ပါ ၀ါ ရယ် ၀ါ့ ဖင်ကြီး ကို ကြည့်ပီး လိုးချင်တယ်နော် မင်းဇော် ၀ါဝါ့ ကို ခါးမှ ကိုင်ကာ မှောက်ပေးလိုက်ပီး တင်ပါးကြီး ကို အပေါ် ကို ဆွဲယူလိုက်တယ် ။ ၀ါဝါ တစ်ယောက် ညင်းနေသော်လည်း ဖင်ကုန်းလျှက် သား ဖြစ်သွားပီ ။ ရှင်းရှင်း ပြောရလျှင် ၀ါဝါ အလိုးခံနေရပေမယ့် ဖင်ကြီး ကုန်းမထားချင် ။ ရှက်လည်း ရှက်နေသေးသည် ။ တသက်လုံး ဘယ်သူမှ မမြင်အောင် ဖုံးကွယ် ထားတဲ့ ဖင်ကြီး တပါးသူ ရှေ့မှာ လေးဘက်ကုန်းကြီး ဖြစ်နေသည် ။ အပျိုတစ်ယောက်မို့ အရှက်တော့ မကုန်သေးပါ။
သို့ပေမယ့် အခုတော့ ဖင်ကုန်းလျှက်သား ဖြစ်နေပီ မင်းဇော်ကလည်း ၀ါဝါ့ ဖင် နောက် မှ ကျကျ နန နေရာယူပီး လီးဒစ် တံကြီး ကို အဖုတ်ဝမှ တေ့လိုက်သည် ။ လုံးဝန်းသော ဖင်လုံးကြီး ကို ကိုင်ထားရသည်မှာလည်း အနှစ်အရသာ ရှိလှသည် ။အရင်နေ့တွေက ၀ါဝါ့ ဖင်ကို ထမိန်ပေါ်မှာ ခိုးခိုး ပီး ကြည့်နေရသည် အခုတော့ ဖင်အဖွေးသား မြင်နေရပီး အခုလိုးနေရသည်မှာ မိမိ ရဲ့ ခယ်မချောချော လေး ဖြစ်နေတာ ကြောင့် မင်းဇော် စိတ်တွေ ပိုထန်နေမိသည် တင်ပါး နှစ်ခြမ်း ပေါ်ကို လက်ဖြင့် အသာ ပွတ်ပေးနေရင်း လီးတံ ကို အဖုတ် ထဲ ထိုးသွင်းလိုက်သည် ။ အဖုတ် မှာ ရွဲစိုနေတာ မို့ ချောချောချူချူ ပင် ၀င်သွားသည်။အ အ အားး ကိုကြီး ဖြေးဖြေး အားးးး ၀ါ့ ဖင်ကြီး တွေ က မိုက်တယ်ကွာ တုံးခဲနေတာပဲ `ဖတ် ဖတ် ဖတ် အားးး ကိုကြီး နာတယ် အရမ်းမစောင့် နဲ့ အဲ့လောက် မခံနိုင်ဘူး အားးး ကိုကြီး ကောင်းတယ် အားးး နာတယ် အင်းး ကိုကြီး စောင့်လိုးပီနော် အားးး အင်းး ကိုကြီး လိုး အားးးလိုးးးးကွာ ဘွတ် ဘွတ် ဘွတ် ခယ်မလေး ရဲ့ ဖင်တုံးကြီး ကို ကိုင်ပီးလိုးနေရသဖြင့် မင်းဇော် မထိန်းနိုင်တော့ သုတ်ရည်တွေ ထုတ်ချင်လာပီ။
အထုတ်အသွင်း တအား မြန်လာသည် ရှေ့မှ ၀ါဝါ ကလည်း တအား အော်နေသည်။အားးး ၀ါဝါ ကိုကြီး ပီးတော့မယ် အားးးးအားးး ထွက် …ထွက်ကုန်ပီ အားးးး နောက်ဆုံး တစ်ချက် အားကုန် စောင့်လိုက်ကာ လီးထိပ်မှ အရည်တွေကို စောက်ဖုတ်ထဲသို့ ပန်းထည့်လိုက်တော့တယ် ။အားးး ကိုကြီး အားးးးး မင်းဇော် ရဲ့ ရှိသမျှ အားတွေ အကုန် ၀ါဝါ့ အဖုတ်ထဲ ထိုးထည့်လိုက်ရသလို အားအင်များ ကုန်ခမ်းသွားကာ လေးဘက် ကုန်းထားသော ၀ါဝါ ပေါ် ကို မှောက်လျှက် ကျ သွားတယ် ။ လီးတံ ကြီး ကတော့ အဖုတ်ထဲမှာ ရှိနေဆဲ လီးတံကို ၀ါဝါ အဖုတ် အတွင်း မှ ဆွဲ ညှစ်နေသလိုမျိုး ၀ါဝါ့ အဖုတ် အတွင်း နံရံများ မှ လှုပ်စိ လှုပ်စိ ဖြစ်နေတယ် ။ ၀ါဝါ ကတော့ တတောင်ဆစ် ထောက်ကာ မင်းဇော် ကိုယ်လုံးကြီး ကို ထိန်းထားရင်း ပီးဆုံးသွားတဲ့ အရသာ ကို ကောင်းကောင်းခံစားနေတယ် ။ အဖုတ်အတွင်း ထဲမှာ လည်း ပူနွေးနွေး အထိ အတွေ့ က ဘယ်အရာနှင့်မျှ မတူသော အထိ အတွေ့မျိုး ။ ငါးမိနစ်လောက် ငြိမ်နေအပီးမှာတော့ ၀ါဝါက ကိုကြီး ဆင်းတော့ကွာ ၀ါ လေးလာပီ မင်းဇော် ဘေးသို့ခန္ဒာကိုယ် ကို လှဲချလိုက်သည် ။
အဖုတ်ထဲ မှ လီးတံကြီးက ပလွတ် ကနဲမြည်သံ နဲ့ ကျွတ်ထွက်သွားတယ် ။ ဘေးမှာ ပက်လက်လန်လျှက် အနေအထား ဖြစ်သွားတော့ မှ ၀ါဝါ စောင်းငဲ့ကြည့်မိသည် ။ လီးတံ ထိပ်မှာ လဲ အရည်တွေ ရွဲစို ပြောင်လက်နေသည် ။ ၀ါဝါ အဖုတ်ကို လိုးပစ်လိုက်တဲ့ လီးကြီး ၀ါဝါ အခု မှ သေသေချာချာ ကြည့်မိသည် ။ မနဲမနော ကြီး လှသည် ။ ဒီလီး ကြီး အဖုတ်ထဲမှာ အ၀င်အထွက်ချောမွတ်နေတာကို ၀ါဝါ အံ့သြ မိတယ် ။ ၀ါဝါ ကုတင်ပေါ်မှာ ဆင်းကာ ရေချိုးခန်းမှာ သန့်ရှင်းရေသွားလုပ်ဘို့ ပြင်လိုက်သည် ။အခန်းထဲမှာ ရှိတဲ့ ရေချိုးခန်းမှာပဲ ပဲ သန့်စင်လိုက်တယ် ။ အဖုတ်အား ရေထိလိုက်တော့ စပ်ဖျဉ်းဖျဉ်း ခံစားရသည်။ သူမ အပျို မဟုတ်တော့ ။ မှန်ထဲမှ ၀ါဝါ့ မျက်နှာ ကို ကြည့်မိရင်း ၀မ်းနည်းသလိုလိုလည်း ဖြစ်မိသလို အထိအတွေ့ မှာ လည်း သာယာမိသည် ။ ရေချိုးခန်းမှ တဘက်အဖြူ ကြီးကို ကိုယ်မှာ ပတ် ကာ အခန်းထဲ ပြန်ဝင်လိုက်တော့ မင်းဇော်က မှေးနေတုန်း ကိုကြီး ထတော့လေ ရေချိုးတော့ ထမင်းပြင်ထားလိုက်မယ်နော် အတူတူ စားမယ် နေ့လည်း တစ်နာရီတောင် ထိုးတော့မယ်။
၀ါဝါ က မင်းဇော် ကို လှုပ်နှိုးလိုက်တယ် အင်းးးး မင်းဇော် မျက်စိ ကို ဖွင့်ကြည့်လိုက်ပီး ၀ါ အရမ်းလှတာပဲ ချစ်တယ် လက်မောင်းလေး ကို အသာဆွဲယူကာ ပါးလေးအနမ်းတစ်ချက် လှမ်းပေးလိုက်တယ် ။ ၀ါဝါ အခန်းထဲမှ အ၀တ်အစားများ ကို ကောက်ယူကာ ထွက်သွားတယ် ။ မင်းဇော်လည်း အိပ်နေရာမှ ထကာ ရေချိုးခန်းထဲ ၀င်ရင်း ရေပန်းအောက်မှာ ဆယ်မိနစ်လောက်ရေချိုးလိုက်တယ် ။ ထမင်းစားခန်းထဲကို ထွက်လာလိုက်တော့ ၀ါဝါက ထမင်းစားပွဲ မှာ အသင့်စောင့်နေတယ် ။ မိန်းမ ဘာဟင်းတွေ ချက်ထားတုန်း ချစ်လေး ကိုကြီး နော် ဘာမိန်းမ လဲ မမကြီး သိသွားမှ ဟုတ်ပေ့နော် အနေအထိုင် ဆင်ခြင် ကိုကြီး နဲ့ ၀ါဝါ တူတူ နေပီးသွားပီ ဆိုတော့ ၀ါဝါလည်း ကိုကြီး မိန်းမ ဖြစ်သွားပီလေ သွားပါ လာ ၀ါလည်း ဘိုက်ဆာနေပီ စားတော့ ထမင်းစားရင်း တစ်ယောက်တလဲ ခွင့်ကျွေးလိုက်ကြသေးသည်။ ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ၀ါဝါ လည်း ပျော်ပါတယ် ။ စိုးရိမ်စိတ်တော့ ရှိတာပေါ့ အခု လို အပျိုစင် ဘ၀ ကို ပေးလိုက်ရတာက တအိမ်တည်းနေတဲ့ မိမိ ရဲ့ ခဲအိုလေ ။ ထမင်းစားပီး တော့ ဧည့်ခန်းမှာ တီဗီ ထိုင်ကြည့်ကြတယ် ။
ဝေမာလှိုင်က လေး နာရီလောက်မှ ပြန်ရောက်မှာ ဆိုတော့ အေးအေးလူလူ ပဲ နေဖြစ်တယ် ။ ဆက်တီပေါ်မှာ ထိုင်တဲ့ အချိန် မင်းဇော် ရင်ခွင်ထဲမှာ ပဲ ။မင်းဇော်က နို့သီးလေးတွေ ကို ပွတ်ချေပေးရင်း စကားတွေ ပြော ၊ ၀ါဝါ ကလည်း မင်းဇော် ရင်ခွင်ထဲမှာ အသာ မှီထားတယ် ။ ၀ါ နာနေသေးလား မင်းဇော် က ၀ါ့အဖုတ်နေရာလေး ကို ကိုင်ကာမေးသည် အင်း သိပ်တော့ မနာတော့ပါဘူး ခုန ကတော့ တအားနာတယ် အင်းး နောက်ဆို လုပ်ရင်းလုပ်ရင်း မနာတော့ဘူးလေ ဟင် ..ကိုကြီးက ခနခန လုပ်မှာလား မမ သိသွားရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ မသိအောင် လုပ်မှာပေါ့ မမ ကျောင်းသွားတဲ့ အချိန် ၀ါ အတန်းအားတဲ့ အချိန် တွေမှာလုပ်မယ်နော် ကိုကြီး ၀ါလေကြောက်နေတယ် မမသိသွားရင် ပြသနာပဲနော် အင်း ပါ မသိစေရပါဘူး ၀ါ တခါမှ အလိုးမခံဘူးသေးဘူးထင်တယ်နော် ကြပ်နေတာပဲ ၀ါ့ အဖုတ်လေးက ၀ါဝါ မျက်စောင်းလှလှ တချက်ထိုးရင်း မင်းဇော်ပေါင်ကို လက်သည်း နှင့် ဆိတ်လိုက်ကာ ခုန က အတူတူ နေပေးတာ မသိဘူးလား လုပ်ဖူးလားမလုပ်ဖူးလား ဆိုတာ အခု ကိုကြီးက ပထမဆုံးပဲ။
အင်း သိပါတယ် ၀ါ့ ရဲ့ အပျို ရည်ကို ယူလိုက်ရလို့ ကိုကြီး အရမ်းဝမ်းသာတယ် အရင်ကတည်း က ၀ါ့ ဖင်ကြီး တွေကို ကြည့်ပီး လုပ်ချင်နေခဲ့တာ ကြာပီ ခိုးခိုးကြည့်နေရတာ သွား ကိုကြီး မကောင်းဘူး တော်တော် ဆိုးတယ် လက်သည်းဖြင့် မင်းဇော် ရဲ့ လီးတံလေး ကို သာသာ လေး ပုဆိုးပေါ် မှ ဆွဲ ဆိတ်လိုက်တယ် အားးးး နာလိုက်တာ သူကျတော့ နာတတ်တယ် သူများကျတော့ တအားလုပ်တယ် ထပ်ဆိတ်ဦးမယ် ရော့ ရော့ရော့ အားးးး မလုပ်နဲ့ အားးးနာတယ် နာတယ် ၀ါဝါ့ လက်ကိုဖမ်းဆွဲ ရင်း ပုဆိုးကို ဖြေလိုက်ကာ လီး တံ ကိုကြည့်လိုက်တယ် လက်သည်း နဲ့ ဆိတ်လိုက်ကာမှ လီးတံ က ထောင်လာတယ် ။ ၀ါ လုပ်လိုက်လို့ ချက်ချင်း ထလာပီနော် ပီး မှ အဆိုး မဆို နဲ့ ကိုကြီး နာသွားလား မင်းဇော် လီးတံ ကို လာကိုင်ရင်း ၀ါဝါ မေးလိုက်တယ် မနာပါဘူး စတာပါ ကိုကြီး လီးကြီးက အကြီးကြီးပဲနော် ရင်ခွင်ထဲမှ နေ၍ ၀ါဝါ မင်းဇော် လီး ကို သေချာ ကြည့်မိလိုက်တယ် ။ ဒစ်ကြီး က လည်း ကားထွက်နေတာပဲ လီးတံ ကြီးက သူမ လက်ထဲမှာ အပြည့် ။ ခုနက တုန်းက ဒီလီးကြီး သူမ စောက်ဖုတ်ထဲကို ၀င်သွားခဲ့တာ အံသြမိတယ် ။
ထိုင်နေတာတောင် လီးတံကြီး က အပေါ် ကို ထိုးထောင် ထွက်နေတယ် ။ လီးတံပေါ်မှာ အရေပြားလေးတွေက ပျော့ပျော့လေး မို့  ၀ါဝါ ဖြေးဖြေး လေး ဆွဲကြည့်ရင်းဆော့ကစားကြည့်လိုက်တယ်။ အဲ့လို မဆွဲရဘူး ၀ါ ရဲ့ လီးတံကို သေချာကိုင်ဆုတ်ထားပီး အပေါ်အောက် ဆွဲရတယ် အပေါ် ကို ဆွဲလိုက်ရင် လီးဒစ် ကို အရေပြား က ဖုံးသွားအောင်ဆွဲ ပီးရင် အောက်ကို ပြန်ဆွဲချ လီးဒစ် ပေါ် လာတဲ့ အထိ ဆွဲချ အဲ့လို လုပ်ပေးရတယ် အဲ့ဒါ ကို ဂွင်းတိုက်တယ်လို့ ခေါ်တယ် အော် အော် … ယောင်္ကျားတွေ ဂွင်း တိုက်တယ် ဆိုတာတော့ ကြားဖူးတယ် ဘယ်လိုလုပ်တာ လဲ မသိတာ အခု မှ သဘော ပေါက်တယ်အဲ့လို လုပ်တော့ ကောင်းလို့လားဟင် ကိုကြီး ကောင်းတာ ပေါ့ ၀ါကလဲ ကိုကြီး တို့ စိတ်ထဲ ရှိတဲ့ မိန်းမ တစ်ယောက် ကို မှန်းပီး အဲ့လို ရှေ့တိုး နောက်ဆုတ် ဂွင်းတိုက်ရင်း အဲ့ဒီမိန်းမ ကို လိုးရတယ်လို့ မှန်းပီး လုပ်တာ ကြာကြာလုပ်လိုက်ရင် ခုနက ၀ါ နဲ့ လိုးသလို ပဲ လီးရေ တွေ ပန်းထွက်သွားတာပေါ့ အော် အဲ့လိုလားးးး အင်း အခု ၀ါ ကိုကြီး ကို အဲ့လို လုပ်ပေးကြည့်လေ အင်းးးလုပ်ပေးကြည့်မယ်နော်။
၀ါဝါ က မင်းဇော် လီး ကို ကိုင်ကာ ရှေ့ တိုး နောက်ဆုတ် သူမလက်ကလေး နဲ့ ဂွင်းတိုက်ပေးတော့တယ် ။ အားးး ကောင်းတယ် ၀ါရယ် အားးးး ဖြေးဖြေး အောက်ထိ တအားကြီး မဆွဲ နဲ့ အင်းးး ဒီလိုလားး အင်း ဟုတ်တယ် ဖြေးဖြေး မှန်မှန်လေး အားးးဟုတ်တယ် ကြာကြာ မသင်ပေးလိုက်ရ ၀ါဝါ ဂွင်း သေချာ တိုက်ပေးတတ်လာတယ် ၀ါ ဒီအတိုင်းကြီး ဆိုတော့ ပူတယ် နာတယ် တံတွေး လေး နဲနဲ လက်မှာ စွတ်ပီးလုပ် အာာာ ကိုကြီးကလဲ ရွံ့စရာကြီး ရွံ့ စရာ မဟုတ်ပါဘူး ၀ါ ရဲ့ သူများတွေ ဆို လီးတောင် စုပ်ပေးကြသေးတာပဲ ၀ါ့ မမ ဆိုလည်း ကိုကြီး လီး ကို စုပ်ပေးတာပဲ ၀ါ့ အဖုတ် ကို လည်း ကိုကြီး ယက်ပေးတာပဲလေ ဟင် တကယ် ကိုကြီး လီးကြီး ကို မမ က စုပ်ပေးတယ်ပေါ့ အင်း ပေါ့ မယုံလို့လား မယုံ ရင် ညကျ ရင် ကိုကြီး အခန်း တံခါးလေး ဟ ထားမယ် လာကြည့် အာာ ကြည့်ရဲဘူး မမ သိသွားမှာ စိုးတယ် မသိအောင် တိတ်တိတ်လေး လာပေါ့ ကိုကြီး အခန်းမီး ဖွင့်ပီး လုပ်မယ် လာကြည့်နော် အင်းးး မင်းဇော် လီးကို ကိုင်ကာ ဂွင်း ဆက်ထုပေးလိုက်သည် ။ ကိုကြီး ဟာကြီးက တဖြည်းဖြည်း ပိုပို ကြီးလာသလိုပဲနော် မာတောင့်တောင့်ကြီး။
အင်းး စုပ်ကြည့်ပါလား ၀ါ ဟာ….. ကိုကြီးကလဲ ၀ါမှ မစုပ်တတ်တာ လာ ကိုကြီးသင်ပေးမယ် ပေး ၀ါ့လက်လေး မင်းဇော် က ၀ါဝါ ရဲ့ လက်ချောင်းလေး ကို ဆွဲယူလိုက်ပီး သူ့ ပါးစပ်ထဲ ထည့်လိုက်တယ် ။ ပီးတော့ လျှာလေး နဲ့ပွတ်လိုက် စုပ်ပြလိုက် လုပ်ပြလိုက်တယ် ။ လီးတံကို စုပ်နေတဲ့ ပုံစံမျိုး ၀ါဝါ့ လက်လေး ကို စုပ်ပေးလိုက်တယ် ။ အဲ့လိုလေး စုပ် ရလား လုပ်တတ်လား အင်း စမ်းကြည့်မယ်လေ အင်း .. လာ ထ ၀ါ က အောက်ကနေ ထိုင် ကိုကြီး က ဆက်တီပေါ် မှာ ထိုင်ပေးမယ် ၀ါဝါ လည်း မင်းဇော် ရင်ခွင်ထဲမှ ဆင်းကာ အောက်မှာ ထိုင်လိုက်သည် ။ မင်းဇော် လီးတံ နဲ့ ၀ါဝါ နုတ်ခမ်း နဲ့ တစ်တန်း တည်း ဖြစ်သွားတယ် ။ မင်းဇော် လီး ကို စုပ်ပေးဘို့ မ၀ံ့မရဲ ဖြစ်နေသည် ။ ငုံ့ လိုက်လေ ၀ါ အင်းးးး … ခေါင်းလေး ငြိမ့်ပြလိုက်ရင်း မင်းဇော် လဒစ်ခေါင်းကြီးအား ၀ါဝါ နုတ်ခမ်းလေး အသာဖွင့်လိုက်ကာ ငုံကြည့်လိုက်သည် အားးး နွေးသွားတာပဲ ၀ါ ရယ် ခုနက ကိုကြီး လုပ်ပြသလိုလေး စုပ်ကြည့်လိုက် ၀ါဝါ က ခေါင်းလေး တစ်ချက် ငြိမ့်ပြလိုက်က လဒစ်ကို တပြွတ် ပြွတ် ဖြင့် စုပ်ကြည့်လိုက်သည် လီးဒစ် တစ်ဝိုက်ကို လျှာဖျားလေး နဲ့ ရစ်သပ် ပေးလိုက်သည်။
အား…. ကောင်းတယ်ဝါ ၀ါက တတ်လွယ်သားပဲ ကောင်းတယ် စုပ် လက်တစ်ဘက်က ကိုကြီး ဥတွေကို ကိုင်ထား လီးတံ အရင်း ထိ ဆွဲ စုပ်ပေး အားးး ကောင်းတယ် သူမ စုပ်ပေးနေတာ ကို ကျေနပ်ကာ ကောင်းနေသည်ကို တွေ့လိုက်တော့ ၀ါဝါ ပျော်သလိုလို ခံစားမိတယ် ဒီထက်ကောင်းအောင် စုပ်ပေးလိုက်ပစ်တယ် အင်းးး အင်းးး ကောင်းတယ်ဝါ အားးးးရှီးးးးး အောက်ကို ၀ဲကျနေတဲ့ ၀ါဝါ့ ဆံပင်တွေ ကို စုပီး ကိုင်ပေးလိုက်ကာ ၀ါဝါ လီးစုပ်နေတာကို သေချာချာ ကြည့်လိုက်မိတယ် ။ လရေ၀င်ရင် အသေခင်တယ် ။ မိန်းမ စက်ပတ် တစ်ကြိမ် လီးဝင် နောက်ထပ် တစ်သက်စားမကုန် ။ ခယ်မ ဆိုတာ လိုက်ပွဲ ။ ဆိုတာလေးတွေ တွေးကြည့်လိုက်တော့ လည်း ဟုတ်သလိုလို ပဲ လို့ မင်းဇော် တွေးမိလိုက်တယ် ။ အကြိမ်ကြိမ် လိုးချင်စိတ်တွေကို ထိန်းခဲ့ရတာ ဒီနေ့တော့ ခယ်မလေး ၀ါဝါ အလိုးခံရုံတင်မဟုတ် သူ့လီးကို အားရပါးရ စုပ်ပေးနေပီ ။ ၀ါဝါ စုပ်ပေးနေမှ လီးတံ ကြီးကလည်း ပိုပို တောင်လာသလိုလို ရှိလာသည် ။ ကောင်းတယ်ဝါ …အားးး အောက်က ဥလေးတွေကို ပါယက်ကြည့် ပါးစပ်ထဲ မှ လီးတံကိုချွတ်လိုက်ပီး အောက်က ဥလေးတွေကို ယက်ကြည့်လိုက်သည် ။
ပျော့စိစိလေး နဲ့ အသည်းယားစရာ ။ လျှာဖျားလေး နဲ့ အလျားလိုက် ယက်ကြည့်သည် ။ ဥလေးတွေကို ငုံစုပ်ကြည့်သည် ပလက် ပလက် ပလက် ပြွတ် အားးးး ကောင်းလား ကိုကြီး ၀ါဝါက ခေါင်းလေး အသာမော့ပီး မေးလိုက်သည် ။ အရမ်းကောင်းတယ် ၀ါ … ၀ါ့ အကျီတွေ ချွတ်လိုက်ကွာ ကိုယ်လုံးတီးလေး နဲ့ ကိုကြီး လီး စုပ်နေတာလေး ကြည့်ချင်တယ် ကိုယ်ပေါ်က စွပ်ကျယ်လေးကို ချွတ်လိုက်ရင်း ပြောလိုက်သည် ကိုကြီး ချွတ်ပေး …. အင်းး… ထ ၀ါဝါ ကို ဆွဲ ထူလိုက်ပီး အကျီရော ထမိန်ရော ချွတ်ပေးလိုက်သည် ။ ၀ါဝါက နို့တွေကို လက်တစ်ဘက်နဲ့ ကာထားပီး နောက်လက်တဘက်က အဖုတ်လေး ကို အုပ်ထားသည် လက်ကြီး မကာထားပါနဲ့ ၀ါရယ် ရှက်တယ် မရှက်ပါနဲ့ ၀ါ ရယ် ခန က ပဲ တခါ လိုးပီးသား ကို ၀ါ့ ကို အခုလို ကိုယ်လုံးတီးလေး နဲ့ စိတ်ထဲ မှာ ခနခန မြင်ယောင်ကြည့်နေခဲ့တာ အခု လို မြင်ရတော့ စိတ်ထဲ တွေးထားတာ ထက်တောင် လှနေသေးတယ် တကယ်လားးး အာ့ ဆို ၀ါ ကျေနပ်တယ် … လက်လေးတွေ ကို ဖယ်ပေးလိုက်ပီး မင်းဇော် နုတ်ခမ်းလေး ကို ၀ါဝါ လှမ်း နမ်းပေးလိုက်တယ် ။
နှစ်ယောက်သား မတ်တပ်ရပ်ရင်း တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ဖက်ကာ အနမ်းတွေ ဖလှယ်လိုက်ကြည် ။ ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် ထို့နောက် မင်းဇော်က ၀ါဝါ ရှေ့မှာ ထိုင်ချလိုက်တော့ မင်းဇော်မျက်နှာနဲ့ ၀ါဝါ အဖုတ်က တစ်တန်းတည်း ဖြစ်သွားသည် ။ တင်ပါး နှစ်ဘက်ကို လှမ်းကိုင်ကာ အဖုတ်ကို လျှာနဲ့ ယက်ပေးလိုက်သည် အားးး ကိုကြီး ရယ် ပေါင်လေး အနည်းငယ် ကားလိုက်ကာ မင်းဇော် ခေါင်းကို ကိုင်လိုက်ရင်း အဖုတ်လေး ကို ကော့ပေးလိုက်မိသည် အား…..ကိုကြီးးးး `အားးး အမလေးးးး အားးးးအ အ အ အ ကောင်းတယ်ကိုကြီး အ အားးးးအားးး ကိုကြီး အားး ချစ်တယ်ကွာ အားးးး မင်းဇော်က အဖုတ်ကို ယက်နေရင်းမှ ၀ါဝါ့ ကို ကိုယ်တစ်ပါတ် လှည့်စေလိုက်ကာ ၀ါဝါ့ တင်ပါးနှစ်ခြမ်း ကို နေရာ အနှံ နမ်းပေးလိုက်သည် ။ ထို့နောက် တင်ပါး နှစ်ခြမ်းကို ဖြဲလိုက်ကာ တင်ပါး နှစ်ခြမ်းကြား လျာ အပြားလိုက် ထည့်ရင်း အထက်အောက် ယက်ပစ်လိုက်သည် အားးး ကိုကြီး အာ့ ဖင် …ဖင်ကြီး အားး ၀ါဝါ့ ဒူးတွေ မခိုင်ချင်သလို ဖြစ်လာကာ ရှေ့မှ ဆက်တီ စားပွဲ ပေါ် လက်လှမ်းထောက်လိုက်သည်မို့ မတ်တပ်ရပ်ကာ ဖင်ကုန်းပေးလိုက်သည့် အနေ အထားဖြစ်သွားသည် ။
ပေါင်ကလည်း ပိုကား လာပီး နောက်မှ မင်းဇော်က တင်ပါး နှစ်ခြမ်းကြား အသားကုန် ယက်ပေးတော့သည် ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် ပလက် ပလက် ပြွတ် အားးး ကိုကြီး ရယ် ချစ်တယ်ကွာ အားးးး ညိုတိုတို စအိုပေါက်လေးမှာ လည်း ပွစိပွစိဖြင့် မင်းဇော် ရဲ့ လျာအောက် ရောက်နေရသည် အားးး ကိုကြီး တက်လိုးပါတော့ အားးး ၀ါ မနေတတ်တော့ဘူး အားးး အမလေးးးး အင်းးး ၀ါ အဲ့ဒီအတိုင်းနေ ခါးလေး နဲနဲခွက်ထား ဆက်တီစားပွဲကို သေချာကိုင်ထားနော် ကိုကြီး နောက်က နေ မတ်တပ်ရပ်ပီး လိုးမယ် အင်းးး ကိုကြီးးး မင်းဇော်လည်း ၀ါဝါ နောက်မှ နေရာ ယူလိုက်ပီး လီးတံကို အဖုတ် ၀ မှာ တေ့လိုက်သည် ။ အိမ်ရှေ့ ဧည့်ခန်းမှာ တင် နှစ်ယောက်သား ကိုယ်လုံးတီး ချွတ်ပီး ခယ်မလေး ရဲ့ ဖင်ကို ကျကျ နန ကိုင်ကာ အဖုတ်ထဲ လီး ထိုးသွင်းလိုက်သည် အရည်တွေ ထွက်နေတယ် ဆိုပေမယ့် အဖုတ်ထဲ လီးဝင်သွားသည်မှာ စီးစီးပိုင်ပိုင် ရှိလှသည် ။ မန္တလေးထိုးမုန့်ကို ရေခဲသေတ္တာထဲ ထည့်ထားပြီးမှ ကိုက်ဝါးလိုက်သည့်ပမာ အိစိစိ ဖြင့် သွားဖုံးမြုပ်သွားသလို ခံစားလိုက်ရသည် ။
အားးး ၀ါ့ အဖုတ်လေး က ကြပ်ကြပ်လေး အီးးးး အားးးးး အားးး ကောင်းတယ် ကိုကြီး ခုနက လိုးတာ ထက်ကောင်းတယ် ၀ါ ခံနိုင်တယ် ဆောင့်ပေးအင့် အင့် အင့် ရော့ ရော့ အားးးး မိန်းမ မရှိစဉ် အိမ်မှာ ခယ်မ နဲ့ ခဲအို ရဲ့ လိုးသံတွေ အော်သံတွေက ဆူညံထွက်နေသည် တင်ပါးတွေကို ဖျစ်ညှစ်လိုက် နို့တွေ ကို လှမ်းဆွဲလိုက်ဖြင့် စည်းချက် ညီညီ ဆောင့်လိုးပေးနေလိုက်သည် ။ အအ အ အ အ အားးး ရှီးးး ခယ်မလေး ကို ကိုယ်လုံးတီး ချွတ်ပီး လိုးနေရတဲ့ အရသာ ကြောင့် မင်းဇော်လီးက အပြတ်အသတ် မာထန်နေသေည် ။ အချက် နှစ်ဆယ်ကျော်လောက် ထပ်ဆောင့်လိုက်ပီး လီးတံကို ချွတ်လိုက်သည် ။ ထို့နောက် ၀ါဝါ့ကို ဆွဲ ထူလိုက်ကာ မင်းဇော်ရှေ့မှာ ဒူးထောက်ခိုင်းလိုက်ပြန်သည် ။ ချစ်လေးး လီးစုပ်ပေးကွာ အာာာ ကိုကြီး လီးမှာ အရည်တွေ နဲ့ ၀ါ့ စောက်ဖုတ်က အရည်တွေပဲ ဘာလဲ ရွံလို့လား ကိုကြီး ၀ါ့ အဖုတ်ကို ယက်တော့တောင် အရည်တွေ ပေသေးတာပဲ ယက်ပေးနော် မင်းဇော် ပြောလိုက်တော့လည်း ဟုတ်သလိုလို ။ ဟုတ်တယ် ကိုယ့် အဖုတ်က ထွက်တဲ့ အရည် ဘာရွံ့ ရမှာလဲ လို့ စိတ်ထဲ တွေးလိုက်ပီး မင်ဇော် လီး ကို ဆွဲ စုပ်ပစ်လိုက်သည် ။
အားးး ကောင်းတယ် ချစ်လေး ရယ် အားးးး `ကြိုက်လား ချစ်လေး အု အု ခေါင်းလေးငြိမ့်ပီး ပြန်ဖြေသည် ။ ပါးစပ်ထဲ လီး ရောက်နေသည်မို အု ..အု ဖြင့်သာ အသံထွက်လာသည် ။ မင်းဇော်လည်း ၀ါဝါ့ ခေါင်းလေးကို ကိုင်လိုက်ပီး ပါးစပ်ထဲကို အဖုတ်လိုးသလို ဖြေးဖြေးလေး အသွင်း အထုတ်လုပ်ပေးလိုက်သည် အားးးရှီးးးး အားးး ကောင်းလိုက်တာ ၀ါ ရယ် ပါးစပ်ထဲမှ လီးကို ဆွဲထုတ်လိုက်ပီး ၀ါဝါက မော့ ကြည့်ကာ အသက်ရှူကြပ်လာပီ ကိုကြီး … မေ့စေ့မှာ လရေတွေရော သွားရေ တွေရော ပေကျံနေသည် ။ ၀ါဝါ့ ကို ဆွဲထူလိုက်ပီး နုတ်ခမ်းလေး ကို အသာ စုပ်နမ်းလိုက်သည် ။ ထို့နောက် ၀ါဝါ့ ပေါင်တစ်ချောင်း ကို လက်တစ်ဘက် ဖြင့် မလိုက်သည် ။ ခြေထောက်တစ်ချောင်းက ခပ်ကွေးကွေးလေး အပေါ်သို့ ပါလာသလို နောက်တစ်ဘက်က ခြေဖျားလေး ထောက်လာသည် ။ လက်တွေက မင်းဇော် လည်ဂုတ်ကို သိုင်းဖက်ထားလျှက်သား ။ မင်းဇော် လည်း လီးတံကို အဖုတ်ထဲ ထိုးသွင်းလိုက်က လက်ကို တင်ပါးတွေပေါ် တင်ထားလိုက်ပီး ထိန်းပေးကာ မတ်တပ်လိုးသည့် အနေအထား ဖြစ်အောင်လုပ်ကာ ဖြေးဖြေးချင်း ညှောင့်ပေးလိုက်သည်။
အားးး ကိုကြီးးး တင်ပါးတွေကို ဖျစ်ညှစ်ပေးရင်း ဆောင့်ဆောင့် လိုးပေးလိုက်သည် အင့် အင့်အင့်အင့် အားးး ကောင်းတယ် ကိုကြီးရယ် မျက်လုံးလေး မှေးစင်းကာ မင်းဇော် နုတ်ခမ်းတွေကိုမမှီ တမှီ လှမ်းဆွဲစုပ်သည် ။ မတ်တပ်ရပ်လိုးတာ ကြာကြာတော့ မလိုးနိုင် ဆယ်မိနစ်လောက် နေတော့ ဒူးတွေ ညွှတ်ချင်လာသည်မို့ ၀ါဝါက ကြမ်းပြင်မှာ လေးဘက်ကုန်းလိုက်ပီး မင်းဇော်က နောက်မှ ဒူးထောက် အနေအထားဖြင့် ဆက်လိုးသည် ။ အပျိုဖြန်းလေး ၀ါဝါ မှာ မင်းဇော်ရဲ့ လီး အရသာ ကို တွေ့ရှိသွားပီး ဖင်ကြီးကို ထောင်နေအောင် ကုန်းပေးရင် အလိုးခံသည် ။ မင်းဇော်ကလည်း ၀ါဝါ အဖုတ်ကို လိုးနေရင်းမှ ဖင်ပေါက်လေးကို လည်း လက်မလေး ဖြင့် ပွတ်ပေးနေသဖြင့် ၀ါဝါတစ်ယောက် လူးလှိမ့် ခံစားနေရသည် ။
အ အ အ အ အားးးအင့် အင့် အင့် အားးးးး ကိုကြီး ၀ါ ပီးတော့မယ် အရမ်းကောင်းနေပီ ဆောင့်လိုးပေး အ အ အားးးး အားးးးး အချက်နှစ်ဆယ်လောက် ဆက်တိုက် ဆောင့်လိုးပေးလိုက်ပီး ၀ါဝါ့ဖင်ကြီးတွေကို မင်းဇော်လီးတံ အဆုံး ဖိသွင်းကပ်ထားလိုက်ကာ လရေတွေဖြောကနဲဖြောကနဲ ပန်းထုတ်လိုက်လေတော့သည် ။ ၀ါဝါ အပေါ်မှာ မင်းဇော်က ထပ်လျှက် ကြမ်းပြင်ပေါ် လဲကျသွားလေသည် ။ မင်းဇော်လီးတံကြီးက ၀ါဝါ့ ဖင်ကြားထဲမှာ ကပ်လျှက် နှစ်ယောက် အသက်ရှူသံတွေက မြန်ဆန်နေကြပီး အတိုင်းသား ကြားနေရသည် ။ အပျိုမလေး ၀ါဝါ .. ခဲအိုဖြစ်သူ အား ပန်းဦးချွေခွင့် ပြုလိုက်သလို ခယ်မလေးအား မယားငယ်အဖြစ်သို့ ဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့သဖြင့် မင်းဇော် အကျေနပ်ကြီး ကျေနပ်မိလေတော့သည်……ပြီးပါပြီ ။